जीवनशैली Archives - नेपाल कुरा
जीवनशैली गृहपृष्ठमा जानुहोस् :
यसरी हटाउन सकिन्छ चायाँ, हेर्नुहोस् घरेलु टिप्स
काठमाडौं । कपालमा चायाँ हटाउन बजारमा श्याम्पुहरू पाइन्छन् तर कुनै पनि श्याम्पुले पूर्णतः चायाँ हटाउन सक्दैनन् । त्यसैले यो ढीठ चायाँलाई हटाउनका लागि घरेलु उपाय अपनाउने सल्लाह दिइन्छ । १. कालो माटो कपालका लागि राम्रो मानिन्छ । दुई घन्टा कालो[…..]
आज (मंगलबार) को राशिफल
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०७८, मंगलवार July 27, 2021 , संवाददाता: hina
मेष शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ । ससाना समस्यामा अल्झनुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा खर्च पनि बढ्न सक्छ । वृष विपरित लिंगीबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । आर्थिक क्षेत्र सुधारोन्मुख हुनेछ । परिवारमा कलह हुन सक्छ ।[…..]
आजको राशिफल !यी राशि भएको व्यक्तिलाई समाजसेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्ने
मेष आज लाभदायक यात्रा हुनेछ । नयाँ कार्यको महत्त्वपूर्ण योजना बन्नेछ । शेयर बाजार र व्यापार, व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ । वृष आज आलस्य र थकानको अनुभूति हुनेछ । व्यक्तिगत स्वास्थ्य र यात्राप्रति सतर्क रहनु पर्नेछ, तर आफन्तको साथ र सहयोग[…..]
आफ्नो आँखालाई स्वस्थ्य राख्न अपनाउनुहोस्, यी घरेलू उपाय !
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०७८, आईतवार , संवाददाता: hina
काठमाडौं । हाम्रो शरीरको अभिन्न अंगमध्ये आँखा एक हो । आँखाविना संसार देख्न सकिदैंन । हाम्रो आँखालाई विभिन्न कारणहरुर्ले नोक्सान पुर्यारहेको हुन्छ, जसले आँखाको ज्योती कमजोर हुन थाल्छ । तर, यहाँ केही घरेलू उपायहरु छन् जसका कारण आँखालाई स्वास्थ बनाउन[…..]
आजको दिन कस्तो होला ? हेर्नुहोस् आफ्नो शुभ राशिफल
मेष अरूलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । आयआर्जनका क्षेत्रमा सुधार आउनेछ । नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुने र पुनर्मिलनको योग पनि रहेको छ । वृष आज न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । आफन्तको प्रगतिमा मन[…..]
मेष स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ । साथीभाइको सहयोग मिल्ने योग छ । मनमा चञ्चलता भएपनि अध्ययनमा रुची । महत्वपूर्ण कार्यमा उल्झन । वृष शत्रु परास्त हुने । सन्तानबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । धार्मिक कार्यमा रूची बढ्ने । महत्वपूर्ण व्यक्तिसँग भेट[…..]
आज (बिहीबार) को राशिफल ! सबैको दिन शुभ होस्
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०७८, बिहीबार July 22, 2021 , संवाददाता: hina
मेष आज अनावश्यक यात्रा तथा अनावश्यक झमेलामा परिएला । मनोरञ्जनमा लाग्दा अवसर गुम्न सक्छ । दिनको उत्तरार्ध भने सुखद् रहनेछ । वृष शुभ कार्यमा सरिक बाईनेछ । नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर मिल्नेछ । श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ । अचल[…..]
के तपाई आवश्यकताभन्दा बढी फेसियल त गर्नुहुन्न ? हुन सक्छन् यस्ता साइड इफेक्ट्सहरु
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०७८, बुधबार July 21, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । अधिकांश मानिसहरु अनुहारमा चमक ल्याएर सुन्दर बन्न फेसियल गर्ने गर्दछन् । विवाह भोजमा जानु होस् वा कुनै पार्र्टीमा समावेश हुन, फेसियल अहिले शहरी फेसननै बनिसकेको छ । फेसियल गर्नु छालाको लागि राम्रो हो तर अत्याधिक फेसियलले अनुहार पनि[…..]
आज यी राशिवालाहरुको धार्मिक यात्राको योग बन्ने, हेर्नुहोस आफ्नो राशिफल !
मेष बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ ।रिसलाई बसमा राख्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । वृष काममा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष सफल रहनेछ । पारिवारिक सद्भाव रहनेछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोग[…..]